प्रलय - Akhabarpatra
अखबारपत्र: नेपाली बृहत शब्दकोषले प्रलयलाई सर्वनाश, विध्वंस, संहार, मृत्यु, मरण भनेको छ ।
संसारमा भएका नाना किसिमका दृश्य एंव अदृश्य पदार्थहरु सबैनै विलिन भएर लुप्त हुने प्रकृया, सृष्टि, लय वा विलय भै सृष्टिको मूल कारणमा मिल्ने प्रकृया, प्रकृतिमा लुप्त हुने क्रिया भनी प्रलयलाई परिभाषित गरेको छ ।
प्रवर कुरो के हो भने प्रलय एक परिभाषाको संकुचित दायरा भित्रमात्र गुम्सिएर बस्न सक्दैन । यसलाई बृहत्तर रुपमा बुझ्ने हो भने अंग्रेजीका केही शब्द सापटी लिदा हितकर हुनेछ । होल्कस्ट (Holocaust),क्याटक्लिज्म (Cataclysm) क्याट्रसट्रफी (Catastrophe), डिस्ट्रक्शन (Destruction) तथा डिजास्टर (Disaster) जस्ता शब्द लिन सकिन्छ ।
शब्दहरु बडो अचम्मका हुन्छन, कहिले कुनै अवस्थामा समभाव प्रकट गरेका हुन्छन भने कहिले कुनै विशम/जेनसाइड (Genocide) शब्दको प्रयोग व्यवहारत नहुँदा होलकस्ट शब्दको प्रयोग गरिन्थ्यो । सन १९४४ मा राफेल लेमकिनले आफ्नो पुस्तक Axis Rule in Occupied Europe मा जेनसाइड शब्दको प्रयोग गरेपछि यसले व्यापकता पायो । त्यसभन्दा अगाडि प्रलय स्वरुप “कत्लेआम” बुझाउन होल्कस्ट शब्दनै प्रयोगमा थियो ।
होल्कस्ट इतिहासमा एउटा कल्पखण्ड थियो जब दोस्रो विश्व युद्ध (१९३९–१९४५) मा लाखौ यहुदीहरु मारिएका थिए । नाजीद्धारा ६० लाख यहुदी महिला, पुरुष र बच्चा तथा लाखौ अन्य जिप्सीहरु स्याल्भिक मानवहरु सोभियत युनियन, पोल्याण्ड र युगोस्लाभियाका नागरिकहरु जेहोभाका साक्षीहरु र राजनैतिक विरोधीहरु मारिएका थिए । ९ नोभेम्वर १९३८ मा नाजीहरुद्धारा ९१ यहुदी मारिएका थिए भने ३० हजारलाई गिरफ्तार गरिएको थियो २६७ (Synagogues) यहुदीहरुको धार्मिक भवन ध्वस्त पारिएको थियो । यो घटनालाई टुक्रिएको सिसाको रात (The night of broken glass) भनिन्छ ।
१ सेप्टेम्बर १९३९ मा जर्मनीले पोल्याण्डमा आक्रमण गर्यो, यही नै विश्व युद्धको शुरुवात थियो जसले लाखौ जीवन समाप्त पा¥यो । प्रत्येक वर्ष २७ जनवरीका दिन वेलायती नागरिकले होल्कस्ट सम्झना दिवस मनाउने गर्छन यही दिन १९४५ मा ठूलो संख्यामा नाजीद्धारा कन्सट्रेइसन क्याम्पमा मार्न राखेका बन्दिहरुलाई सोभियत सेनाले रिहा गरेको थियो ।
नेपालमा भएका कोतपर्व जस्तै हत्या पर्वहरु जनयुद्धको नाममा मारिएका १७ हजार आत्माहरु र तीनका आश्रित परिवारहरुको विजोग पनि जेनसाइड हो अर्थात प्रलय हो यानिकि होल्कस्ट नै हो । विश्वमा भएका सबै जातीय सामूहिक हत्या नरसंहार कत्लेआम होलकस्ट हो ।
प्राकृतिक संसारमा घट्ने ठुलो मात्राका बृहत घटनाहरु इा एक्कासी हुने राजनैतिक या सामाजिक उथलपुथल क्याट्क्लिजम शब्द भित्र समावेश गरिन्छ । सुनामी ज्वालामुखी, भूकम्प जलवायु परिवर्तन, उल्का पिण्ड, महामारी रोगहरु, भूकम्पीय छालहरु जसले जीवको नाश गर्न सक्छन क्याट्क्लिजमका उदाहरणहरु हुन । भयङकर बाढी तथा ठूलो मात्राको आधी तुफान जसले हजारौ धन जनलाई समाप्तिको भूवँरीमा पु¥याइदिनुनै क्याट्क्लिजम हो अर्थात प्रलय हो । जहाँ मुत्यु छ त्यहाँ प्रलय छ । महामारीहरु हैजा, झाडा पखाला, दादुरा, डेंगु मलेरिया, फ्लु, एड्स, कोरोना आदि इत्यादि क्याट्क्लिजम हुन ।
५८६ विसिई मा व्यविलोनियनद्धारा जेरुसेलममा प्रथम मंदिर ध्वस्त गरेको घटनालाई डिस्ट्रसन र ७० विसिई मा रोमनद्धारा दोस्रो मन्दिर ध्वस्त पारेको घटनालाई क्याट्क्लिजम मानिएको छ ।
ग्रन्थ पुराणहरुमा प्रलयलाई नाशनै भनिएको छ । विस्तृत भूभागमा हुने भयंकर बर्वादी, संसार आफ्नो मूलकारणले प्रकृतिमा लिन हुने क्रिया, सृष्टिको सर्वनाश, जलमय हुनु प्रलय हुनु हो । पुराणमा काललाई चार युगमा बाडिएको छ ।
हिन्दु मान्यता अनुसार जब चार युग पुरा हुन्छन तब प्रलय आउछ । प्रकृति ब्रम्हामा लिन हुनुनै प्रलय हो । प्रलय चार प्रकारको मानिएको छ ।
१) नित्य प्रलय : वेदांत अनुसार जीवहरुको निरन्तर रुपमा हुदै गर्ने मूत्युलाई नित्य प्रलय भनिन्छ । सृष्टिमा प्रतिपल प्रतिदिन नित्य रुपमा जन्म र मृत्युको चक्र चलिरहेको हुन्छ ।
२) नैमित्तिक प्रलय :वेदान्तका अनुसार प्रत्येक कल्पको अन्तमा हुने तिनवटै लोकको क्षय या विनास हुनुनै नैमित्तिक प्रलय हो । पुराण अनुसार ब्रम्हाको एक दिन मानिन्छ । यस्तो प्रलय सूर्यको तेज तापद्धारा हुन्छ र समस्त धर्तीका जीव नष्ट हुन्छन ।
३) द्धिपार्थ या अत्यान्तिक प्रलय : योगिजन ज्ञानको माध्यमले ब्रम्हामा लिन हुने प्रकृया नै अत्यान्तिक प्रलय हो अर्थात मोक्ष प्राप्ति गरेर जन्म र मृत्युको चक्रबाट बाहिर निस्किनुनै अत्यान्तिक प्रलय हो ।
४) प्राकृत प्रलय ब्रह्माण्डको भस्मरुपनै प्राकृत प्रलय हो । यसमा समस्त प्रकृतिको नै विनास हुन्छ । सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड शुन्य अवस्थामा रहन्छ । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश केही पनि रहदैन ।
हामी धेरैजसो प्रलय या यसका स्वरुपबाट डराउछौ आतिन्छौ । स्वभाविक क्रियासँग किन डराउनु, तपाँई यो धरतीमा तब सम्म रहने हो जबसम्म तपाईको समय र मिति रहन्छ । तपाँई चाहे गरीब भिखमंगा हुनुस या अरवपति धनाण्ड्य मिति समाप्ति पछि १ मिलि सेकेण्ड पनि रहन पाउनु हुन्न चाहे शरीरका पुरै अंग फेर्नुस या अति महंगो अस्पताल जानुस किनको याद राखौ हरेक उभिएका चीज वस्तु, जीव एक दिन ढल्ने छन । यति मात्र हो कि मिति रहुन्जेल उभिने हो ।
धरहरा ढल्यो, फेरी कुनै दिन ढल्छ, ताजमहल पनि ढल्छ समय आउछ । ओशोले भने जस्तै प्रकृतिले तपाईलाई सग्लो शरीर दिएर पठाएको छ, तपाँईले पनि सोही सग्लो शरीर प्रकृतिलाई दुरुस्त बुझाएर जाने कोशिस गर्नुस । हरेक सृष्टि पछि प्रलय हुन्छ अर्थात हरेक जन्म पछि मृत्यु हुन्छ ।
विश्वमा ठूला नरसंहारहरु सृष्टिकालबाटै भएका छन । होलकस्ट या जेनसाइड भएका छन । प्रकृति स्वयमले मानवको अत्याचार सहन नसकेर क्याटक्लिजम गरेकी छन । अहिलेको महामारी कोरोना अर्थात कोभिड १९ क्याटक्लिजमको एउटा स्वरुप हो । यो भाइरस हिजो पनि थियो भोलि पनि रहने छ । जो अनुशासित छैनन उनीहरु मध्य धेरैको ज्यान लिने छ । यी सब प्रलय अथवा मुत्युका बाहाना हुन् । हुन्छन भैरहन्छन, हुदै गर्छन् । यस्ता प्रलयकालमा संयमताका साथ धैर्यताका साथ निम्न कुरामा ध्यान दिदै आफुलाई उभ्याउने प्रयत्न गरौ ।
क. अति अनुशासित बनौ, पलभरको लापरबाहीले ज्यान लिन्छ ।
ख. आफुलाई चिनौ र अन्तरमनले यात्रामा डुबुल्की मारौ ।
ग.प्रेमिल बनौ, प्रेम बाडौ, आफुसँग छ, अरुलाई बाडौ ।
घ. चेतनाको ढोका खौलो, विवेक सम्भत ढंगले आफुलाई प्रस्तुत गरौ ।
ङ.घटना हो घट्छ, अध्यारो पछि फेरी उज्यालो हुन्छ । प्रलय पछि सृष्टि र सृष्टि पछि प्रलय । हरेक दुःखद समय पनि बितेर जान्छ । मुल कुरा त आफुलाई दह्रोसँग उभ्याई राख्नु हो, टिकाई राख्नु हो ।
हामी मानवहरु परीक्षार्थी हौ । प्रकृतिमाताले हाम्रो संयमता र धै¥यताको परीक्षा बारम्बार लिने गर्छिन हाम्रा व्यवहार र अकरमण्यताका कारण कहिले काही अति जटिल प्रश्न सोधिने गरिन्छ, हामी संयमताका साथ अटल हुन जरुरी छ । अन्तत जस्तो रोप्ने हो त्यस्तै काट्ने हो ।